Xisbul islaam oo Cambaareysay Xili u kordhinta Ciidamada AU-da ee Amisom - khaliilberberawi's blog
Xisbul islaam oo Cambaareysay Xili u kordhinta Ciidamada AU-da ee Amisom
Cambaareynta Ururka Xisbul islaam oo fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho Caasimada Dalka ayaa waxaa ay ka dambeysay markii shalay lagu dhawaaqay xilkordhin loo sameeyay ciidamada Amisom ee ku sugan qeybo ka mid ah dalka sida magaalada Muqdisho.
Qaar ka tirsan Sarakiisha Xisbul islaam oo maanta kulan saxaafadeed u qabtay saxaafada Magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in ay la dagaalami doonaan ciidamo horleh oo la keeno Dalka iyo kuwa haatan joogaba.
Waxaa ay saraakiishaasi sidoo kale halkaasi ka iclaamiyeen jihad lala galo ciidamo horleh oo ka tirsan Midowga Africa oo la keeno gudaha Dalkan, waxanay Dowlada Jabuuti uga digeen in ay ciidamo ka socda u soo dirto Somaliya maadaama ay soo baxayaan warar ku aadan in dowlada Jabuuti ay ka mid noqon doonto wadamada ciidamada Nabad ilaalinta u soo diraya Somalia.
Sarkaalka u qaabilsan dhanka warfaafinta Ururka Xisbul islaam Sh. Maxamed Macalin ayaa isagu si toos ah uga digay Jabuuti in ay ciidamo u soo dirto Dalka Somalia isagoo dowlada Jabuuti ku sheegay in ay tahay wadan heerar kala duwan Somaliya la soo martay si ay u nabadowdo balse waxaa uu yiri “Waan ka xunahay in maanta ay ku soo biirto kallaqeyb lakala qeybiyo Somalia”
Hadalka ururka Xisbul islaam ayaa imanaya iyadoo maalinimadii shalay magaalada Addis Ababa Caasimada Dalka Itoobiya lagu soo gaba gabeeyay kulan ay madaxda Afriga isugu yimaadeen kaasi oo lagu ansixiyay in ciidamada Nabad ilaainta ku sugan Somaliya loosii kordhiyo joogitaanka ay joogaan.
wariye Maxamed C/raxiim Xasan (Fowz) Muqdisho-Somalia
# Posted on Sunday, 10 January 2010 at 9:08 AM